गुप्त कक्षा कोठा नकआउट! थोर श्रोकले इन्टरनेट मार्केटि Gur गुरुसलाई समस्यामा पार्दछ
शनिबार, डिसेम्बर 8, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 थोर श्रोक
** हेड्स अप **
अन्तमा Read 1,000 CASH जित्ने मौकाको लागि पढ्नुहोस्।
डग र तपाईं धेरैले अर्को नेक्स्ट इन्टरनेट मिलियनेयर रियलिटी शो मा मलाई समर्थन गर्नुभयो, र म दोस्रो रनर अप भएता पनि मैले केही आश्चर्यजनक इन्टरनेट मार्केटिंग गुरुहरूबाट सिक्ने राम्रो मौका पाएँ। गोप्य कक्षा कोठा.
र म एक धेरै राम्रो विद्यार्थी थिए। यति धेरै राम्रो छ कि म मेरा दुई पूर्व गुरु प्रशिक्षकहरू, मार्लन स्यान्डर्स र अरमान्ड मोरिनलाई जोएल कमसमा गरेको जंगलमा लगिरहेको छु। गुप्त कक्षा कोठा सम्बद्ध कार्यक्रम!
यहाँ के म सिकेको छु र कसरी म विश्वको सबै भन्दा राम्रो इन्टरनेट मार्केटर्स को पिटेको छु।
मार्केटिंग निन्जा हुनुहोस्, मार्केटिंग ठग होइन।
मार्लन सैन्डर्सले मलाई विगतमा सहज रूपमा चिनिने कुनै चीजको पछाडि सिद्धान्त सिकायो। उनले भने कि हरेक बलको साथसाथै कमजोरी हुन्छ। यदि तपाईं एक राम्रो प्रतिस्पर्धी को विरुद्ध छ, तपाईं आफ्नो शक्ति आक्रमण गर्नु हुँदैन। तपाईं कमजोरीमा आक्रमण गर्न चाहनुहुन्छ जुन उनीहरूको सामर्थ्यसँग आउँछ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ कम्प्युटर बेच्ने बेस्ट बायको बिरूद्ध जाँदै हुनुहुन्छ भने, एक मध्यम कुशल बिक्री र समर्थन स्टाफ र पीसीको विशाल चयनको साथ स्टाफ भएको एक सुपर स्टोर खोल्नुहोस्।
यसको सट्टा उच्च गुणवत्ताका कम्प्युटरहरू बेच्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ताको आवश्यकताको लागि अनुकूलित डिजाइन गरिएको छ र यसलाई पुरस्कृत गर्न पुरस्कार-विजेता सेवा र समर्थन योजना प्रदान गर्दछ। तिनीहरूको शक्ति भित्र कमजोरीमा आक्रमण गरेर, तपाईं बेस्ट बायको प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ।
अधिक ब्रेक तपाईको छवि राम्रो हुनु राम्रो हो
अमेजन, वा गुगल, वा यूट्यूब जस्ता साइटहरू बहु-मिलियन डलर वेबसाईटहरू हुन् जसका लोगोहरू चिन्ता लिन्छन् र आगन्तुकहरू उनीहरूलाई विश्वास गर्न आएका छन्।
अरमान्ड मोरिनले मलाई बताउँदछ कि कुनै दुर्घटना हुँदैन वास्तवमा तपाईले आफ्नो दिमागमा माथिका प्रत्येक कम्पनीको लोगोहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
नतिजा जब यी मध्ये कुनै एक वेबसाइटले तपाइँले कारबाही लिन चाहान्छ, कि त यो किताब किन्दै छ वा भिडियो अपलोड गर्दैछ, तपाईले त्यो कार्य गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनकि तपाईलाई विश्वास छ कि तपाई नाम र लोगोमा विश्वास गर्नुहुन्छ।
तपाईको ब्यापारमा भएको सबैभन्दा ठूलो लागत पहिलो पटक ग्राहक पाउनु हो। उही ग्राहकलाई माध्यमिक बिक्री एक केकवाक हुनुपर्छ यदि तपाईं ठीक ब्रान्ड गर्नुभएको छ र तपाईंको ग्राहकले तपाईंलाई अर्को पटक ढकढक्याउँदा आउँदछ।
यदि एउटा चित्र १,००० शब्द हो भने, भिडियो के लायक छ?
तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न भिडियोको प्रयोग गर्नु एक कला हो र यदि तपाईं यसलाई मास्टर गर्नुहुन्छ भने तपाईंसँग एकदम प्रभावकारी उपकरण छ जुन धेरै मानिसहरूले बेवास्ता गर्छन्।
जो कोहीले केहि सेकेन्डमा ब्याकलिंक पोष्ट गर्न सक्दछ। गुगल खोजीमा प्रवेश गर्न यो कुनै ठूलो कुरा होइन। तर एक भिडियो लिदै केहि समय र केहि प्रतिभा लिनुहोस्। अधिक व्यक्तिलाई भिडियोको साथ ट्राफिक कसरी चलाउने भनेर थाहा हुँदैन, त्यसैले तिनीहरू यसलाई कुनै पनि गडबडी गर्दैनन्।
माइक कोइनिग्स माइकले मलाई भिडियो कसरी बनाउने भनेर सिकायो, यसलाई नेत्रगोलको अगाडि कसरी ल्याउने, र त्यस पछि ती वेबसाईटमा ती नेत्रगोलकहरू लिनुहोस्। उनले मलाई कसरी खोजी ईन्जिनले जस्तै ट्राफिक चलाउन भिडियोहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाए, र यो एक विशाल कम्पोनेन्ट हो जसले मलाई अरू गुरु मार्केटर्सको भन्दा बढि प्रेरित गर्‍यो।
उनले बताए कि मानिसहरूले नराम्रो भिडियो लाई एक बिन्दुमा सहन सक्दछन्, तर यदि तपाइँको अडियो खराब छ भने, तपाइँ पहिलो २ सेकेन्ड पछि जानु सक्नुहुन्न। यदि तपाईं उपकरणमा पैसा खर्च गर्न लाग्नुभएको छ भने, पहिले राम्रो माइक्रोफोन किन्नुहोस्, र त्यसपछि राम्रो क्यामेरा लिनुहोस्।
त्यसो भए त्यहाँ $ 30 हुनुपर्दछ प्रकाश रिग तपाई होम डेपोमा सामानबाट बनाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको पूरै भिडियो सेट लाईट गर्दछ। थप भयानक ज्ञान जसले तपाईंको भिडियोहरू अद्भुत देख्नेछ र केहि अन्यमा तपाईं धार दिनुहुन्छ जसले केही भिडियो अनलाइन फ्याँक्छन्।
लामो पुच्छल एक ब्लगरको सर्वश्रेष्ठ यातायात मित्र हो
डेव टेलरले व्याख्या गरे कि यदि तपाईले व्यक्तिले चाहेको सामग्रीसहित पोष्ट निर्माण गर्नुभयो भने, तपाईले भविष्यमा पनी अनिश्चित कालको लागि थोरै ट्राफिक काट्नुपर्नेछ किनभने मानिसहरूले उनीहरूलाई के खोज्छन् भनेर खोज्छन्।
अन्तत: ब्लगि toमा लामो पुच्छ दृष्टिकोणले साना यातायात पुलहरू उत्पन्न गर्दछ जुन एक शक्तिशाली वेब उपस्थितिमा थप गर्दछ।
तपाईं केहि अनलाइन को बारे मा खोज्न सक्नुहुन्छ र डेभ टेलरको कुनै एक पृष्ठमा परिणामहरु मा पाउन सक्नुहुन्छ।
गुरु बट-किकिंगको एउटा सिम्फनी
एक गुरूको प्रणालीलाई मात्र लिनुको सट्टा, मैले सेक्रेट क्लासरूमबाट बहुविध विधिहरू जोडेँ जुन मार्केटिंग मेशिन आफैंमा भएका कुनै पनि प्रशिक्षकहरू भन्दा बढि शक्तिशाली थियो।
मैले एउटै उत्पादन प्रमोट गर्न डिजाइन गरिएका तीन वेबसाइटहरूको साथ सुरू गरें। थप साइटहरू शीर्ष १० खोजी परिणामहरूमा स्पटहरू दावी गर्न थप अवसरहरूको अर्थ हुन्छ र अन्य साइटहरूलाई तलतिर जोड गर्दछ।
म छिटो सारियो मेरा साइटहरू पूर्व-प्रक्षेपण अघि अनुक्रमित गर्न, र www.nextinternetmillionairedvd.com मेरो प्रमुख वेबसाइट थियो।
मार्लनको सल्लाह अनुसरण गर्दै मैले गुप्त कक्षाकोठाको कमजोरीमा आक्रमण गर्नुपर्‍यो। उस्तै खेल्नु भन्दा पनि मैले तपाईको पीसीमा कुकी सेट गरेको छु? रेफरल खेल, एक छूट की पेशकश गरेर मूल्य मा गुप्त कक्षा को आक्रमण।
जोएल मैले बिक्री गर्ने हरेक सीक्रेट क्लासरूम सेटको लागि २०० अमेरिकी डलर सम्बद्ध कमिशन पेश गर्दै छ, त्यसैले मैले जो कोही मेरो वेबसाइटबाट खरीद गर्दछ को लागी $ १०० छूट प्रस्ताव। मेरो मतलब हो गम्भीर रूपमा, यदि तपाईं जे भए पनि सेट खरीद गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, not १०० किन बचत नगर्ने, हो त?
जति सक्दो मैले सिक्यो कि डिभिडि सेटको नाम गोप्य कक्षाकोठा हुनेछ, मैले आधारभूत एसईओ / एसईएम प्रविधिहरू प्रयोग गरें गुगलमा मेरो अर्कोinternetmillionairedvd.com वेबसाइटको लागि # २ स्थान समात्न।
अर्को मैले एउटा ईमेल सबमिशन फारम बनाउनको लागि कोडर भाडामा ल्यायो जसले मलाई वेबसाइटमा नाम र ईमेल ठेगानाहरू स collect्कलन गर्न र डेटाबेसमा भण्डारण गर्न अनुमति दिन्थ्यो। मैले १ 170० भन्दा बढी लीडहरू संकलन गर्न प्रबन्धित गरे जो छुट छुट प्रस्ताव मा रुचि थियो।
त्यसपछि मैले १२ इन्टरनेट मिलियनेयर एपिसोडहरूबाट भिडियो स्क्रिन क्याप्चर र अडियोबाट बनेको १२ गोप्य कक्षाकोठा नमूना भिडियोहरू (प्रत्येक प्रशिक्षकको लागि १) उत्पादन गर्‍यो। मैले माइक प्रविधि प्रयोग शीर्षक, वर्णन, URL हरू र तल तेस्रो सन्देशहरू लेख्न प्रदर्शन गर्दछ। मैले ती सबलाई धरतीमा प्रत्येक भिडियो साझेदारी साइटमा अपलोड गरें।
मैले त्यसपछि गुगल, याहू, र युट्यूब भिडियो खोजमा गोप्य क्लासरूम शव्दको लागि प्राय: सबै शीर्ष स्पटहरू समातें। अर्को, यो ब्लग खोजीमा हमला गर्ने समय थियो।
मैले मेरो ब्लगमा दिनको धेरै चोटि डाभ टेलरको लामो पुच्छर सल्लाह प्रयोग गरेर पोस्ट गर्न सुरू गरें। जब मेरो प्रतिस्पर्धा उनीहरूको सम्बद्ध लिंकहरू मार्फत ट्राफिक ड्राइभ गर्दै कूकी युद्धहरू खेलिरहेको थियो, म ईमेल ठेगानाहरू स collecting्कलन गर्दै थिए र सम्बन्ध निर्माण गर्दै थिए।
त्यसपछि डिसेम्बर on मा जोएलले ट्रिगर तान्यो। मैले मेरो सूचीलाई ब्लास्ट गरें, ब्लग पोष्ट प्रकाशित गर्‍यो, गुगल एडवर्ड्स विज्ञापन राख्यो, र मेरो पोष्ट-प्रक्षेपण अवतरण पृष्ठहरू अपलोड गर्‍यो।
जब धुलो मिल्छ, म जोएलको १ १ सम्बद्ध पछि १ हुँ। म मार्लन स्यान्डर्सको साथसाथै अरमान्ड मोरिन भन्दा अगाडि बढें? धेरै गुरू जसले मलाई गोप्य कक्षाकोठामा शिक्षित गरे। तिनीहरूले अझै पछाडि मलाई ओभरटेक गर्न रैली गर्न सक्छन्, तर त्यो जहाँ चरण 1 भित्र आउँछ!
मलाई तपाईं आवश्यक छ मलाई काम समाप्त गर्न र यो प्रमाणित गर्नुहोस् कि गुप्त कक्षा को शिक्षाहरूको योग प्रत्येक व्यक्तिगत सत्र भन्दा बढी शक्तिशाली छ।
म दौडिरहेको छु मेरो ब्लगमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् $ १1,800०० भन्दा बढी नगद र पुरस्कारमा पकड को लागी जित्नको लागि तपाईंले शट लिन के गर्नुपर्दछ भनेको पोष्ट गर्नुहोस्, टिप्पणी गर्नुहोस्, र ब्लगरोल लिंक जोड्नुहोस्।
प्रतियोगिता हेर्नुहोस् र मलाई तपाईको बिचार के हो थाहा दिनुहोस्। म कसरी गर्छु भन्नेमा डगलाई राख्नेछु, तर मेरो इरादा भनेको मैले कोलोराडोमा अगस्टमा शुरू गरेको काम समाप्त गर्ने हो, र यस पटक मलाई योएलले याद गर्नेछन् भन्ने लाग्छ।
थोरको नेतृत्वमा, श्रोक इनोभेसनहरू कम्प्युटर कम्पनीलाई लिंकन को # १ स्वतन्त्र कम्प्युटर मर्मत कम्पनी २००१ देखि धेरै आक्रामक प्रतिस्पर्धीहरूको बजारमा मतदान भैरहेको छ। थोरले २००ruptcy मा बैंकरप्टिको कवचबाट श्रोक इनोभेसनसलाई बढाए र २०० in मा ओमेहा र लिंकन, NE का स्थानहरुमा सेवा सेवा घर १.$ मिलियन डलर भयो।
जाभास्क्रिप्ट: गतिशील उत्पन्न समय सूची
$ २००.200.00? के त्यो 1500 १XNUMX०० को सेट जस्तो थिएन र तपाईं आफै शोमा हुनुहुन्न? आउच